दु:खद खबर : विमानस्थलबाट टेक अफ हुने क्रममै जहाज दुर्घटना, रहेनन् खेलाडी! – All top Here
Home/अन्तर्राष्ट्रिय/दु:खद खबर : विमानस्थलबाट टेक अफ हुने क्रममै जहाज दुर्घटना, रहेनन् खेलाडी!
6,088 Less thanaminute
ब्राजिलमा आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा परी ४ जना फुटबल खेलाडीको मृत्यु भएको छ। निजी जहाजमा यात्रा गरिरहेका पाल्मास क्लबका अध्यक्ष र चार खेलाडीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
उत्तरी ब्राजिलको टोकान्टिन्स राज्यको विमानस्थलबाट टेक अफ हुने क्रममा उनीहरू चढेको जहाज रन वेको अन्तिमबाट चिप्लिएर मैदानमा पुगेको थियो। दुर्घटनामा चालकको पनि मृत्यु भएको छ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएकाले फुटबल खेलाडी क्लबका अरू सदस्यसँग नगई निजी जहाजमा गोइआनिया जान लागेका थिए। त्यहाँ उनीहरूको टिमले भिला नोभासँग खेल्ने कार्यक्रम थियो। आइसोलेसनको अन्तिम दिन भएकाले उनीहरू निजी जआइतबारको दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन।
ब्राजिलको फुटबल संघ दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका र पाल्मस परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। उनीहरूको सम्झनामा आइतबार हुने सबै खेलमा एक मिनेट मौनधारण गर्न भनेको छ। **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
अब म चुप लागेर बस्दिन, नेताहरुको भण्डाफोर ।पूर्व डिआईजी रमेश
भर्खरै भयानक विमान दुर्घटना चालक दलका सदस्य सहीत सवार सबै को मृत्यु
कोरोनाभाइरसलाई रोक्न सक्ने औषधी : रेम्डेसिभिरले जगायो आशा अनुमित दिने तयारी
चीन र भारत सीमा विवाद लद्दाख क्षेत्रमा बंकर बनाउँदै चिनियाँ सेना